သူ့ကောင်မလေး Sofia အတွက် ကိုယ်ရံတော်ငှားထားတဲ့ Justin Bieber - Myanmarload
သူ့ကောင်မလေး Sofia အတွက် ကိုယ်ရံတော်ငှားထားတဲ့ Justin Bieber
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် က 01:06 August 20, 2016
ကဲကဲ Sofia နဲ့ Justin ကို မုန်းနေတဲ့သူတွေ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါတော့နော်။ Soifa ကအခုဆိုရင်တော့ သူ့ကို စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ ယောက်ျားတွေဝန်းရံနေပါတော့တယ်။ Justin Bieber က ဘယ်လောက်တောင်ဂရုစိုက်ပြီးကာကွယ်ချင်လဲဆိုတော့ သူ့ ကိုယ်ရံတော်ကိုပါ ကောင်မလေးကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားပါတယ်။
Justin Bieber, ၂၂နှစ်နဲ့ Sofia Richie ၁ရနှစ် တို့ လက်တွဲပြီးတော့ သွားနေတာကို Laguna ကမ်းခြေ မှာတွေ့ပြီးကထဲက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကိုလူတော်တော်များများကဝေဖန်ခဲ့ရပါတယ်၊ များသောအားဖြင့်က မကောင်းထဲ့ဘက်ကများပါတယ်။ သီချင်းအသစ် 'Cold Water'ထွက်ထားတဲ့ Justin ကတော့ သူ့ကောင်မလေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုံလုံခြုံခြုံ ရှိစေဖို့အတွက် ကိုယ်ရံတော်ပါငှားပေးခဲ့ပါတယ်။ Selena Gomez နဲ့ တွဲတုန်းက တောင်မှ ဒီလောက်ထိ Justin Bieber ရုတ်ရုတ်သဲဖြစ်တာမတွေ့ရပါဘူး။ Justin က Sahara Ray တို့ Halley Baldwin တို့နဲ့ Sofia မတိုင်ခင်က တွဲခဲ့ဘူးသေယ်လဲ ဒီလိုမျိုး ထူးခြားတဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုရတာတော့ Sofia တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လားတော့မသိဘူး နှုတ်ခမ်းနီကောင်မလေးတွေက သူတို့အတွဲ ကို အမြင်ကတ်ကျပါတယ်။ သဝန်တိုလို့နေမှာပေါ့နော်။ ဒါမှမဟုတ်အားကျဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလား?
အဲ့ဒီတော့ Justin ရဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ရည်းစား အနေနဲ့ သူ့ကောင်မလေးတွေကို ဆက်ဆံနေတာ ကြီးကပြီးသွားပြီလား?? ဟုတ်တယ်။ ပြီးသွားလောက်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Sofia ကို ဂရုစိုက်မှုတွေ၊ သူ့ကို ချစ်ပြနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Justin Bieber တစ်ယောက် သူ့ကိုယ်သူ ချစ်ရတာလုံလောက်ပြီလို့ထင်အုံးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက် ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ် အလုပ်ရှုပ်နေတာတောင် ရေဒီယိုကလာတဲ့Justin သီချင်းအသစ် ကို နားထောင်ချိန်ရပါသေးတယ်။ Justin အတွက်တော့ sofia က Selena လိုမျိုး အတည်တွဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သူ့ ပရိသတ် Belibers တွေကြားမှာတော့ Sofia ကို မကြိုက်တဲ့သူတော်တော်များနေပါတယ်။ Belibers တွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ Sofia က Justin ခဏတွဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါပဲ။